Iinkcukacha zokuqala zoluhlu lwe-Evil Evil zicocwe kwiNetflix | Iindaba zeGajethi
Iinkcukacha zokuqala zoluhlu lweNetflix Resident Evil ziye zavuza
UPaco L Gutierrez | | Ihlaziywe 12/02/2020 04:53 | Iimuvi kunye nothotho, ngokubanzi, Videogames
Ekuqaleni kwe-2019, imagazini eyaziwayo kwi-Intanethi Umhla wokugqibela Ndiyayityhila loo nto INetflix ibisebenza kuthotho lweeNdawo zokuHlala, isaga esoyikisayo somdlalo wevidiyo omkhulu uCapcom. Yenye yezona franchise zidumileyo neziqhamo kwihlabathi lemidlalo yevidiyo, yenziwe ngo-1996 kunye nomdlalo wayo wokuqala wevidiyo kwiSony Playstation yokuqalaUthengise iikopi ezizigidi ezingama-90 kuwo onke amaqonga ukuza kuthi ga ngoku.
INetflix okwangoku ayenzanga naluphi na uhlobo lwesiteyitimenti esisemthethweni, kodwa Isishwankathelo soluhlu luye lwavuza "ngengozi", ke ngoko kuyaqinisekiswa ukuba umxholo ukhona kwaye sinokuyibona kwiiveki okanye kwiintsuku ezimbalwa, yinto edla ngokwenzeka kwezi meko. Asimbalwa abalinde ezi ndaba zinje ngamanzi kaMeyi emva kokonwabisa kodwa kwangaxeshanye uthotho olubi lweefilimu nguPaul WS AndersonSinethemba ingakumbi xa sijonga into esiyibonileyo kutsha nje ngothotho lwegqwirha.
1 Isishwankathelo esivuziswe yiNetflix
1.1 Ulwazi kunye nomhla wokukhutshwa:
1.2 Uthotho olurhoxisiweyo lokuHamba kwabahlali lwafunyanwa ngo-2017
Isishwankathelo esivuziswe yiNetflix
Isishwankathelo somxholo yafunyanwa nguJawmuncher umsebenzisi weforum Hlela kwakhona, kumlamli ophakathi weNetflix. Inkonzo iphendule ngokususa umxholo ngokukhawuleza ukuvela kokuvuza. Kuyabonakala ukuba ingxelo izakuzama ukuzilungelelanisa neziganeko ezenzeka kumabali omdlalo wevidiyo; abalinganiswa abaphambili baya kuba noxanduva lokufumanisa Yintoni i-Umbrella yeziko elixuba amayeza ukuya kuthi ga?, Iphuhliswe kwintsholongwane i-T (Virus Tirant).
“Isixeko saseCelarfield, MD (eMaryland), sithathe ixesha elide siphantsi komthunzi weengxilimbela ezintathu ezibonakala zingadibani: i-Umbrella Corporation, iSibhedlele sabagula ngengqondo iGreenwood kunye nesixeko saseWashington DC. Ngoku, amashumi amabini anesithandathu eminyaka emva kokufunyanwa kweT Virus, iimfihlo ezifihlwe ngala maqela mathathu ziya kuqala ukutyhilwa kunye neempawu zokuqala zokuqhambuka.
Isishwankathelo esivuzayo sihambelana ngokupheleleyo nolwazi oluchazwe lixesha eliphakathi. Umndilili osele ekhankanyiwe kwangaphambili ukuba INetflix ijolise ekuphandeni iinkqubo zangaphakathi zombutho we-UmbrellaKwaye kwenzeka njani ukuba ngaphandle kokuba isasazekile intsholongwane ebulala isixeko siphela, iyaqhubeka nokufumana amandla. Ngaphandle koko kuyaziwa ukuba Inkampani yemveliso uConstantin Film iyabandakanyeka kwimveliso yothotho Umabonakude okwangoku, ke, yonke into iyangena ukuba siyayongeza kwinto yokuba sichaze kweli nqaku.
Ulwazi kunye nomhla wokukhutshwa:
Okwangoku akukho lwazi malunga nomhla wokuqala kwayo, kuba ukuvuza nangona bekuvela kwiNetflix uqobo akubandakanyi imihla. Yonke into ibonisa ukuba uthotho luzakwaziswa kulo nyaka ka-2020, basebenzise ithuba lokutsalwa ngumdlalo wevidiyo olandelayo kwi-saga. Ububi babahlali 3 Khuphela iya kukhutshwa nge-3 ka-Epreli kwaye iya kuba sisithethi esimangalisayo kuthotho ngokwalo nakwiNetflix, enokuthi le nto ifumane abalandeli abaninzi be-saga ukuba bahlawulele inkonzo ukuze babone uthotho.
Uthotho olurhoxisiweyo lokuHamba kwabahlali lwafunyanwa ngo-2017
Kuko konke oku kufuneka kuqatshelwe ukuba bekukho iinzame zangaphambili zokwenza uthotho lwale saga, uthotho lweeNdawo zokuHlala eziMbiwe. Umlawuli ozimeleyo uShawn Lebert kunye neMance Media babhengeze kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuba bayasebenza koku Iprojekthi ebizwa ngokuba yiArklay, Igama leentaba apho indlu yendlu ibekwe khona apho ibali lomdlalo wokuqala wefranchise lwenzeka khona.
Ibali lilandele umcuphi ogama linguJames Reinhardt owayephande ukubulawa kwabantu abaninzi eRaccoon City; Nangona kunjalo, isifundo khange siqhubeke neprojekthi. Kubungqina obuvakalisiweyo bomqondo, zonke izingqinisiso kwi-franchise eyoyikisayo zisusiwe kwividiyo, kodwa isabonisa imeko efanayo yexesha kwi-saga. Iintloni kutheni, isahluko somqhubi wenqwelomoya salatha iindlela, nangona kuyinyani oko Le yayingeyiyo imveliso ephezulu yohlahlo-lwabiwo mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iimuvi kunye nothotho » Iinkcukacha zokuqala zoluhlu lweNetflix Resident Evil ziye zavuza
I-Samsung Galaxy Buds +, iimpawu zebhotile ezifanayo